Kedu ihe bụ ụtụ isi ndị njem na ebe a na-etinye ya na Europe? | Akụkọ Njem
Kedu ihe bụ ụtụ isi ndị njem na ebe a na-etinye ya na Europe?
Maria | | Noticias, njem
N'ime ọnwa nke July, Barcelona kwadoro ụtụ isi njem nleta maka njem, nke a ga-agbakwunye na ndị etinyelarị na ụlọ ọrụ nkwari akụ na njem. Ma ọ bụ n'ihi mgbalị nke kansụl obodo iji chebe obodo nke Barcelona site na ịba ụba ndị njem ma ọ bụ n'ihi ọchịchọ ịnakọta ego, nke bụ eziokwu bụ na ha na-anwa ịme ihe maka njem nlegharị anya, dịka gọọmentị mpaghara nke Venice na-aga. iji hazie ohere ịbanye na St. Mark's Square site na 2018.
Ma olee otú ụtụ isi a na-akpọ ndị njem nleta si emetụta ndị njem nleta? Mgbe ị na-akwụ ụgwọ maka ezumike anyị, anyị nwere ike ịchọta onwe anyị na akwụkwọ ọnụahịa ikpeazụ yana ọnụahịa dị elu n'ihi ọnụego a. Echefula post na-esote ebe anyị ga-ekwu maka ụtụ isi ndị njem, ihe kpatara ya na ebe ndị gụnyere ya.
Barcelona ma ọ bụ Venice abụghị naanị obodo Europe na-etinye ụtụ isi ndị njem. N'ọtụtụ ebe gburugburu ụwa, etinyegoro ha, dị ka Brussels, Rome, Balearic Islands, Paris ma ọ bụ Lisbon.
1 Kedu ụtụ isi ndị njem?
2 Kedu ihe kpatara anyị ga-eji kwụọ ụtụ isi ndị njem?
3 Ọnụ ọgụgụ ndị njem na-ezu ezu
3.1 Taxestụ isi
3.2 Gwọ kwa ọnụnọ
3.3 Taxestụ isi njem nleta na Europe
3.3.2 Mba ndị ọzọ na Europe
Kedu ụtụ isi ndị njem?
Ọ bụ ụtụ isi nke onye njem ọ bụla ga-akwụ mgbe ọ gara n'otu obodo ma ọ bụ obodo ọ bụla. A na-ana ụtụ isi a mgbe ị na-agba akwụkwọ tiketi ụgbọ elu ma ọ bụ na ebe obibi, n'agbanyeghị na e nwere usoro ndị ọzọ.
Kedu ihe kpatara anyị ga-eji kwụọ ụtụ isi ndị njem?
Ndị ọchịchị na gọọmentị na-etinye ụtụ isi ndị njem iji nwee ego ha ga-eme iji kwalite nrụpụta na ọrụ ndị njem nleta, mmepe na nchekwa. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, nchekwa ihe nketa, ọrụ mweghachi, nkwado, wdg. Na nkenke, ụtụ isi ndị njem bụ ụtụ a ga-atụgharịrị nke ọma n'obodo a na-eleta.
Ọnụ ọgụgụ ndị njem na-ezu ezu
Mgbe ị na-ede akwụkwọ ụgbọ elu, ụgbọ elu ahụ na-ebo anyị ọtụtụ ụgwọ iji kpuchie nchekwa na ụgwọ mmanụ. Ha na-etinyekarị na ọnụahịa ikpeazụ nke tiketi ahụ na ụtụ isi maka iji ihe ọdụ ụgbọ elu na ụgbọ elu.
N'aka nke ọzọ, e nwere ụtụ ọzọ a na-etinye na ndị njem hapụrụ mba. A maara ha dị ka ụgwọ ọpụpụ ma tinye ha na mba ndị dịka Mexico, Thailand ma ọ bụ Costa Rica.
Gwọ kwa ọnụnọ
A na-atụ ụtụ isi ndị njem a na ịnọ na họtel na ebe obibi ndị njem nleta (gụnyere ụlọ maka ezumike) ma mebie n'ime ụgwọ ụlọ nkwari akụ ma ọ bụ na-akwụ ụgwọ iche iche, n'agbanyeghị na n'ọnọdụ ọ bụla ọ dabere na VAT (ọnụego belata 10%). Ndị njem nleta na-anakọta ya wee dozie ya na ụlọ ọrụ ụtụ isi kwekọrọ na nkeji atọ ọ bụla.
Na Spain, obodo ọ bụla kwụụrụ onwe ya nwere iwu nke ha gbasara ụtụ isi ndị njem, mana ha dabara na ịkekọrịta nchịkọta maka ego maka njem njem na-aga n'ihue nke na-enye ohere nchebe, ndozi na nkwalite nke ndị njem nleta na akụrụngwa dị mkpa maka nrigbu ha. Na nkenke, a na-eji ha iji nye nzaghachi ma kwalite mpaghara ahụ.
Taxestụ isi njem nleta na Europe
Na Spain n'oge a, a na-akwụ ụtụ isi ndị njem na Catalonia na Balearic Islands. Na mpaghara nke mbụ, a na-etinye ya na họtel, ụlọ, ụlọ ime obodo, ebe izu ike na njem. Ọnụ ego ahụ dịgasị n'etiti 0,46 na 2,25 euro kwa onye kwa ụbọchị dabere na ọnọdụ ntọala na ụdị ya.
Na obodo nke abụọ, ụtụ ndị njem na-emetụta ụgbọ mmiri, họtel, ụlọ oriri na ọ andụ andụ na ụlọ ndị njem. A na-akwụ ụtụ isi n'etiti 0,25 na 2 euro kwa onye ọbịa na abalị dabere na ụdị ebe obibi. N'oge oge dị ala ọnụego na-ebelata, yana maka ịnọ karịa ụbọchị asatọ.
Mba ndị ọzọ na Europe
Ihe kariri ọkara nke mba Europe na-etinyerịrị ụtụ isi ndị njem iji kwalite mpaghara ahụ. Offọdụ n'ime ha bụ ndị a:
Rome: Na 4 na 5 kpakpando ị na-akwụ ụgwọ 3 euro ma na mpaghara ndị ọzọ ị na-akwụ euro 2 kwa onye na abalị. Undermụaka ndị na-erubeghị afọ 10 agaghị akwụ ụgwọ a.
Milan na Florence: A na-etinye ụtụ isi ndị njem nke 1 euro kwa mmadụ na abalị maka kpakpando ọ bụla nke ụlọ nkwari akụ ahụ nwere.
Venice: Ọnụ ego ụtụ isi ndị njem na-adabere na oge, mpaghara nke ụlọ nkwari akụ ahụ na otu ya. Na elu oge 1 euro n'abalị na kpakpando na-ebo ebubo na agwaetiti nke Venice.
Taxtụ ndị njem na France na-emetụta mba niile ma dịgasị iche na euro 0,20 na 4,40 dabere na ụdị ụlọ nkwari akụ ahụ ma ọ bụ ọnụahịa ụlọ ahụ. Dịka ọmụmaatụ, a na-akwụ ụgwọ 2% ọzọ maka ọnụnọ nke ọnụahịa ya karịrị euro 200.
Tax njem nleta na Belgium na-adabere na obodo na udi nke oruru. Na Brussels ọ dị elu karịa mba ndị ọzọ ma nwee etiti euro 2,15 maka họtel 1-kpakpando na 8 euro maka họtel 5-kpakpando, n'otu ụlọ na abalị.
Na isi obodo, Lisbon, ụtụ isi ndị njem bụ euro 1 maka ndị ọbịa ọ bụla na-anọ na họtel ọ bụla ma ọ bụ ụlọ ọrụ. Ọ dị irè naanị n'izu mbụ ị nọrọ n'obodo ahụ. Undermụaka ndị na-erubeghị afọ 13 anaghị akwụ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Kedu ihe bụ ụtụ isi ndị njem na ebe a na-etinye ya na Europe?
Gaa na ebe dị iche iche na Spain ebe Egwuregwu Egwuregwu